Nyocha Ulefone Armor, ihe niile na-erughi € 150 | Gam akporosis
Miguel Gaton | | Nyocha, Ulefone
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ewere akụkụ ahụ mara mma mgbe ha na-azụ otu ma ọ bụ ụdị smartphone ọzọ, nke ahụ abụghị ụdị ụdị ngwaahịa anyị na-eweta n'oge a. Na Ulefone Armor bụ ekwentị na - eguzogide ọgwụ nke zutere ọkọlọtọ mba ụwa IP68 na ihe na ọnụahịa dị ala karịa € 150 N'ezie enwere niche na ngalaba a nke ndị ọrụ ọkachamara na-achọkarị kwa ụbọchị. Ka anyị hụ n'ụzọ zuru ezu njirimara niile nke a anya-ụzọ smartphone.
1 Imewe adịghị mkpa
2 Njirimara teknụzụ nke Ulefone Armor
3 Ọnụahịa na ebe ịzụta Ulefone Armor
Imewe adịghị mkpa
Dịka ị pụrụ ịhụ na mbụ, Ulefone Armor abụghị ezigbo ọnụ, jiri nlezianya dozie, dị gịrịgịrị ma gbaa ọkụ. Bụ a Armored smartphone iguzogide mmiri, ájá na ujo juru na nkwa zuru ezu, ya mere imewe ahụ bụ ihe doro anya na ngwaọrụ a (na usoro dum n'ozuzu ya) tinye n'akụkụ. Akụkụ ya na ịdị arọ ya na-emesapụ aka ma na-aga 148.9 X 75.8 X 12.5 millimeters na 195 gram nke ịdị arọ.
N'ime ya nwere batrị 3.500 mAh nke na-enye ohere a ikike zuru oke maka ụbọchị ọrụ zuru oke na ojiji.
Ihe eji eme ya eme bu ihe anakpo ma sie ike, ezughi oke site n’udi obula nke ogugu, otiti ma obu mgbe emmiri n’ime mmiri ma obu aja. Ihuenyo nwekwara ihu ya Corning ozodimgba iko.
Njirimara teknụzụ nke Ulefone Armor
Ulefone Armor bụ a ufọt ufọt nso ama ya mere ọ ga-enye arụmọrụ na arụmọrụ dabara na nso ahụ. Ọ na-abịa onwem na a 4,7-anụ ọhịa ihuenyo na HD 720p mkpebi. N'ime anyị nwere MediaTek 6753 na nhazi 8 GHz 1.3-processor, 3 GB nke Ram, 32 GB nke nchekwa nchekwa na kaadi microSD, igwefoto 13 megapixel na ọkụ ọkụ LED na 5 megapixel nke abụọ, yana gam akporo 6.0 Marshmallow sistemụ arụmọrụ. Ọ dịghị njọ na ọkwa arụmọrụ, ọ bụ ezie na anyị na-atụ uche na ha na-etinye usoro nhazi ọgbara ọhụrụ dịka MediaTek Helio P10 (MT6755) nke na-arụ ọrụ nke ọma.
Na ọkwa njikọta, ọ na-abịa na LTE, nkwado maka SIM abụọ na-arụ ọrụ, WiFi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 4.0 LE na aGPS na nkwado GLONASS. O nwekwara Redio FM, NFC, na bọtịnụ mberede nke ahụ nwere ike ịba uru nye ọkachamara ọ bụla ma ọ bụ onye egwuregwu dị egwu ma ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ.
Ọnụahịa na ebe ịzụta Ulefone Armor
Dị ka anyị kwuru na mmalite nke nyocha ahụ, Ulefone Armor bụ dị na ọnụ ahịa mara mma nke naanị 148 XNUMX y can nwere ike ịzụta ya site na ịpị ebe a. Ọ bụ ọnụ na-enye a nnukwu uru maka ego nakwa na e mere ya maka ndị ọrụ ahụ ọkachamara ọkachamara na-arụ ọrụ n'ọnọdụ ndị dị oke njọ ma ọ bụ maka ndị egwuregwu na-eme njem chọrọ onye smartphone nwere ike iguzogide n'emebighị emebi.
3 akara kpakpando
Onye edemede: 50%
Nhazi ahụ adịla ochie
Enwere ike ịmezi ogo ihuenyo
Na gallery na-eso ị ga-ahụ nkọwa niile nke Ulefone Armor.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ulefone » Nyocha Ulefone Armor, ihe niile na-erughị € 150